ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ
Posted by Knowledge Seeker on Jul 26, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
င်္Face Book မှာ တက်လာတဲ.သတင်း တစ်ပုဒ် ပါ Original ကို ရှာ ပြီး တင် ပေ လိုက် ပါ တယ်
Posted about 8 days ago | 144 comments
ီCredit to Daily Post Nigeria Online Newspapaer
သူ ရဲ.ကျော်ကြား မှု နဲ. ငွေကြေးချမ်းသာ မှု ကြောင်. မယား ၆ ယောက် နဲ. အိမ် ထောင် ကျ ခဲ.တယ်။ Nigeria နိုင်ငံ Benue State မှ Ogbadibo Local government အပိုင် Ugbugbu Owukpa ရွာ မှ အချော အလှဆုံး မိန်းကလေး များ ကို သူရဲ. ကာမစိတ် ချစ်မြတ်နိုး စိတ် တွေကို အညီအမျှ ဖြန်ဝေ ပေး ခဲ.လေသတဲ.။ အဲ.ဒီ နေရာ မှာ ပဲ အင်္ဂါ နေ.နံက် အ စောပိုင်း က Uroko Onoja အူရိုကို အိုနိုဂျာ လို.ခေါ်တဲ. သူ.ကို မနာလိုဝန်တိုအား ကြီး သူ သု မယား ၆ ယောက် က အ သက်ဆုံး သည် ထိ မဒိမ်းကျင်. ခဲ.ကြတယ်လို. ဆို ကြပါတယ်။
ဒုက္ခရောက်မဲ. အင်္ဂါ နေ.နံက် အ စောပိုင်း ၃ နာရီမှာ အိုနိုဂျာ ဟာ Ochanja ဆို တဲ. ကလပ်က နေ အပြန် အငယ်ဆုံး မယား အခန်းကို ဦးတည်လာခဲ.ပါတယ်။ သူ ပြန်မလာ ခင်မှာ ပဲ ကျန် မယားကြီး များ က ဒုတ် ဓား များ ကိုင် ဆွဲ ပြီး အငယ်ဆုံး မယား Odachi အခန်းကို ဖေါက်ထွင်း ၀င် ရောက် ပြီး စောင်. နေ ခဲ.ပြီး သူ.ကို သူတို.အားလုံး နဲ. နေ ဘို.တောင်း ဆို ပါတယ်တဲ.။ သူ ဟာခုခံ ဘို. ကြိုးစားခဲ.သော်လည်း နောက်ဆုံး မတတ်သာ တော.ပဲ အငယ်ဆုံး မယာ က နေ ပြီး တစ် ယောက် ပြီး တစ်ယောက် နေ ပေး ရပါတော.တယ်။
ပဉ္စမ မယား က အိပ် ရာ ပေါ် အရောက် မှာ တော. ” ကျွန် မ ယောက် ကျား ဟာ အသက် မရှု တော. ပါ ဘူး၊ သူ တို. အား လုံး ရယ်မော ပြီး ပြေး လာကြပါ တယ်၊ ဒါပေမဲ. ကျွန် မ က သူ အ သက် ရှု လာ အောင် လုပ် လို မ ရ တော. ဘူး လို. သိ ချိနိ မှာ တော. သူ တို. အား လုံး တော ထဲ ပြေး သွား ကြ ပါ တယ် ” လို. အငယ်ဆုံး မယား က ပြော ဆို ပါ တယ်။
သူ ဟာ ရွာ ကောင် ကျိုး အ တွက် များ စွာ လှု ခဲ. သူ ဖြစ် ပြီး ဒေသ တိုး တက် ရေး ဆောင် ရွက် ခဲ. သူ လူမှုရေး ကုသိုလ်ရှင် တစ်ဦးဖြစ် ကြောင်း ရွာ ခံ လူငယ် တစ် ဦး က ပြော ကြား ခဲ.ပါ သတဲ.။
တပြိုင်တည်းလည်း ကျွေးလိုက်ရော …
အမလေးလေး …… နည်းတဲ့ကုသိုလ်ကံလား
တဘရိတ်ထဲ run လိုက်ရတော့ ဟန်း သွားရော “နိတ်ဟ” :-)
ံHeart Attack ရ တာ ဖြစ် မယ်
ဟိုတုန်းက ၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်က
ယောက်ျားက နှာခေါင်းသွေးတွေ ထွက်လာတာကို ရိုက်ပြတာကို မြင်ဖူးတယ်
သြော်……ဒါ့ကြောင့်…ကိုပေ နှာခေါင်းသွေး ခဏခဏလျှံတာကိုး………………..(ပြောတော့ နေပူထဲထွက်မိသလေး ဘာလေးနဲ့….ခုတော့ ပေါ်ပြီ)
ကိုယ်တိုင်မှ အင်္ဂလိပ်လို မဖတ်တတ်တော့
ချောက် GTC အကြောင်းလည်းဖတ်ဖူးလိုက်တယ်
အင်း.. ကိုယ်လည်း နောက်ဆို အဲလို မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ရပေအုံးတော့မှာပ..